Halyeey Korneyl Xasan Maxamed Nuur Shaati Gaduud: Hoggaamiye naftiisa u huray sharafta iyo wanaaga dadkiisa. By Arlaadi | Arlaadi
Halyeey Korneyl Xasan Maxamed Nuur Shaati Gaduud: Hoggaamiye naftiisa u huray sharafta iyo wanaaga dadkiisa. By Arlaadi
June 6, 2019 | Arlaadi Online
Soomaali waxay tiraahdaa hadal qiimo badan oo ah “Waari mayside war ha kaa haro”.
6- June ee sanad walba waa maalin ay shacabka Koonfur galbeed xasuustaan Halyeey Korneyl Xasan Maxamed Nuur Shaati Gaduud iyo halgankii uu usoo galay dadka Koonfur galbeed. Halganka Shaati Gaduud maxaa saldhig u ahaa?
Halgankiisu wuxuu ku saleysnaa in la helo Soomaali siman oo aan kala sareyn, nabad ku wada noolasho, caddaalad iyo Midnimo Soomaaliyeed. Wuxuu ahaa hoggaamiye ay dadkiisu jecel yihiin oo ilaa maanta ay u duceyaan.
Allaha u naxariisto Shaatigaduud wuxuu ahaa halyeey Geesi ah oo naftiisa, waqtigiisa iyo Malkiisa u huray wanaaga dadkiisa. Waana midaas mida keentay inaysan dadku iloobin taarikhda uu ka tegay oo dal iyo dibad ay maanta oo kale xasuustaan halgankii uu usoo galay dadkiisa iyo dalkiisa.
Waxaa jirta oraah ah: “Ninkii u dhinta danta iyo wanaaga dadkiisa wuxuu dhintay dhimasho weyn oo micnaheedu yahay lama iloobi doono, balse ninkii u dhinta ka shaqeeynta dantiisa gaarka ah wuxuu dhintay dhimsho yar haba gaaro 100 sano jir oo micnaheedu yahay waa la iloobi markiiba bacdamaa uusan ka tagin taariikh wanaagsan”. Arlaadi
Halka hoose ka dhageyso wareysi uu bixiyay waqtigii uu ku jiray halganka hadaladii u yiri waxaa ka mid ahaa. “Waxaan ka dagaalamaynaa dulmi iyo waxbaan ku siiyay, cidna cid kale wax masiin karto dalka waan wada leenahay”. Korneyl Xasan Maxamed Nuur Shaati Gaduud.
Madaxweynihii hore ee Koonfur galbeed Soomaaliya